ကလေးအစာခြေစနစ် အတွက် အရေးပါတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (Probiotics) - Page 18 of 76 - Hello Sayarwon
၉ လလွယ် ၁၀ လဖွားထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြီးပြင်းလာဖို့က မေမေတိုင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ဟုတ်။ မမွေးခင်က အစားအသောက်ဂရုစိုက်သလို နို့တိုက်နေချိန်မှာလည်း ကလေးကို ထိခိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ နှစ်ခါမစဉ်းစားဘဲ ရှောင်လိုက်တာ မေမေတိုင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာပါ။ ဒီလိုကနေ အရွယ်ရောက်လို့ အစားစစားချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝအောင် ပါဝင်စေဖို့ကိုလည်း မေမေက အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးတတ်ပါသေးတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းစေဖို့ ဘာတွေများလိုအပ်မလဲ…….
ကလေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းစေဖို့ဆိုရင် အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်မှာပါ။ ဒီတော့ ကျန်းမာဖို့က အဓိက အာဟာရပြည့်ဝဖို့က ပထမဆိုပါတော့။ အာဟာရပြည့်ဝမှ ကျန်းမာမှာပါ။ ကျန်းမာမှလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးပြင်းနိုင်တော့မှာပေါ့။ ဒီတော့ အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့ ဘာတွေများပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုမလဲ။
ကလေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် အာဟာရ
ကြီးထွားဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အရေးပါတဲ့ ဇာတ်လိုက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
ပရိုတင်း – ခန္ဓာကိုယ် ကောင်းမွန်စွာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အတွက် အရေးပါ ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ နဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အကောင်ဆုံး ကြီးထွားစေနိုင်သလို အရိုးတွေကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေသလို နှလုံးနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ပါတယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် – ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ရပ်ပါ။ တစ်ရှူးတွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဆီ – စွမ်းအင်ကို အဓိကရရှိစေနိုင်တဲ့ အစားအရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် – ကျန်းမာတဲ့ အရိုးနဲ့ သွားတွေဖြစ်ပေးစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အာရုံကြော၊ ကြွက်သား နဲ့ နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ် – သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေဆီ အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေပါတယ်။
ဖောလိတ် – ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဆဲလ်တွေကို ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ် – ဝမ်းမှန်စေပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ နဲ့ ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် A – အမြင်အာရုံ ကျန်းမာစေပြီး အရေပြားပြဿနာကင်းစေမှာပါ။ ကူးစက်ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် C – ဖျားနာမှုကင်းစေအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကဆဲလ်တွေကို ကျန်းမာစေတယ်။ သွေးကြောနံရံတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်တယ်။ အနာကျက်စေနိုင်တယ်။ အရိုးနဲ့သွားတွေကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးပေါ့။
Probiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား) – အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ သက်ရှိဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးပါ။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာကြောင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်စေမှာပါ။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို တော်တော်များများရင်းနှီးပြီးဖြစ်ပေမယ့် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလို့သိကြတဲ့ (Probiotics) ကတော့ နည်းနည်းစိမ်းနေဦးမှာပါ။ ဒီတော့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (Probiotics) လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (Probiotics) တစ်မျိုး
ကလေးတစ်ယောက်အကောင်းဆုံးကြီးပြင်းစေဖို့က အစာခြေစနစ် ကျန်းမာဖို့လိုပါမယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေဖို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (Probiotics) အမျိုးအစားတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ Lactobacillus လို့ခေါ်တဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားပါ။ ဒီအကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို ကောင်းတယ်လို့ပြောရတာက သူတို့က အူမကြီးထဲမှာ ရှင်သန်နေထိုင်ကြပြီး
အစာခြေစနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်
ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးတယ်
ကလေးကို ဝမ်းမှန်စေတယ်၊ စတဲ့တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားက တွေ့ရအများဆုံး Probiotic ပါ။ ဒီ Probiotic အမျိုးအစားကို ဒိန်ချဉ်၊ မိခင်နို့နဲ့ Lactobacillus အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားဖြည့်စွက်ထားတဲ့ အာဟာရဖြည့်နို့တွေမှာတွေ့ရများပါတယ်။ Probiotics တွေက ဝမ်းလျှောတာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး အစာကြေခဲတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်း အစာခြေစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ကြီးထွားဖို့အရှိန်ယူနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာတဲ့အစာခြေစနစ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အကောင်းဆုံးစုပ်ယူပေးပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာပါ။
ကဲ…မေမေတို့ရေ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်နဲ့အမျှချစ်ရတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား(Probiotic) ပါအောင်ပြင်ဆင်ပေးတော့မယ်ဟုတ်…..
9 Must-Eat Nutrients for Your Child https://www.parents.com/kids/nutrition/healthy-eating/must-eat-nutrients/ Accessed Date 14 January 2020
What Are Probiotics? https://www.webmd.com/digestive-disorders/what-are-probiotics#2 Accessed Date 14 January 2020